Booqashada Sri Lanka: Dalxiisayaasha Isbaanishka miyay u baahan yihiin fiisaha? | Safarka Absolut
Emilio Garcia | | Hindiya
Sri Lanka waa mid ka mid ah wadamada si aad ah u khuseeya sanadihii ugu dambeeyay sida goob dalxiis. Dalka, oo loo yaqaan "jeexa Hindiya" sababtoo ah mawqifkiisa juqraafi, wuxuu awood u leeyahay inuu ka dhigo dalxiis kasta oo maalmo yar ku qaata dhulkiisa inuu jeclaado. Iyagoo muuqaalo buuraley ah oo ay ka buuxaan beero shaaha ama magaalooyinkeeda gumeysiga ee cajiibka ah waa qaar ka mid ah soo jiidashada ugu weyn.
Laakin wadanku waxa kale oo uu leeyahay xayawaano kala duwan oo kala duwan kuwaas oo ku nool duurjoogta seerayaasha qaranka, sida maroodiga iyo shabeelada. Farsamooyinkeeda Buddha oo lagu xardhay dhagaxyada iyo xeebaha duurjoogta ah ee koonfurta ee ku habboon surfing waa qaar ka mid ah walxaha sasabaya tirada sii kordheysa ee dalxiisayaasha sannad kasta.
1 Laakiin dalxiisayaasha Isbaanishka miyay u baahan yihiin fiisaha si ay u galaan Sri Lanka?
2 Nidaam lagama maarmaan ah oo lagu galo dalka
Laakiin dalxiisayaasha Isbaanishka miyay u baahan yihiin fiisaha si ay u galaan Sri Lanka?
Si aad u booqato Sri Lanka, ha ahaato dalxiiska, ganacsiga ama gaadiidka waddan kale, waa lagama maarmaan in la helo a fiisaha Sri Lanka taasoo kuu ogolaanaysa inaad si sharci ah dalka ku soo gasho oo aad wakhti ku qaadato. Muwaadiniinta Isbaanishka u baahan tahay inaad dalbato Visa ka hor inta aanad booqan Sri Lanka, marka lagu daro in ay awood u leedahay in ay soo bandhigto shuruudaha kale ee waddanku uga baahan yahay socdaalka caalamiga ah.
Fiisaha lagu galo Sri Lanka, oo sidoo kale loo yaqaan ETA, ayaa looga baahan yahay dhammaan dadka safarka ah. Waa ogolaansho ansax ah in qofku dalka soo galo, waxaanad heli kartaa ka dib marka aad ballansato duulimaadyada, laakiin had iyo jeer ka hor inta aanad dalka soo gelin. Waa inaad sidoo kale tustaa sarkaalka laanta socdaalka inaad haysato caddaynta taageerada dhaqaale ee aad dalka ku joogto, sidoo kale waa inaad tustaa baasaboor shaqaynaya ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo marka aad dalka soo gasho.
Shuruudaha kale ee looga baahan yahay kuwa soo gala Sri Lanka, ama dalxiis ama arrimo ganacsi, waa sii qabsashada duulimaadka dib ugu noqoshada waddan kale ama aad bixisid fiisaha ganacsi ee gaarka ah haddii aad waddanka u soo gasho ganacsi, shaqo ama iibsashada iyo iibinta alaabada iyo / ama adeegyada.
Nidaam lagama maarmaan ah oo lagu galo dalka
Isbaanishka qorsheynaya inay booqdaan Sri Lanka waa inay helaan ETA Sri Lanka ka hor intaysan dalka soo gelin. Waxaad ku heli kartaa adiga oo shakhsi ahaan uga codsada safaaradda Sri Lanka ee Spain, laakiin waxa fiican inaad internetka ku samayso. Waxayna tahay in dalka Aasiya uu hadda ogolaado nidaamka in lagu sameeyo internetka si loo fududeeyo gelitaanka dalxiiska ee dalka.
Waa lagama maarmaan in la raaco tillaabooyinka si loo buuxiyo foomka, kaas oo laga yaabo inaad u baahato la-talin xirfadeed. Marka la eego kharashka helitaanka Sri Lanka ETA, Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 45 euro sida ku cad xogtii ugu dambeysay ee ay bixiso Sri Lanka, inkasta oo ay kala duwanaan karto wakhtiga aad qabanqaabinayso safarkaaga. Qiimaha Sri Lanka ETA ee sababaha ganacsiga waxaa laga yaabaa inay lahaato kharash dheeraad ah marka la barbar dhigo ETA sababaha dalxiiska.
Habka caadiga ah ee nidaamka noocan ah waa in la helo jawaab rasmi ah iyada oo loo marayo kanaalka isgaarsiinta qaarkood, sida iimaylka. Boostada inta badan waxa lagu helaa in ka yar 7 maalmood, marka waa muhiim in la sameeyo wakhtiga ka hor taariikhda dalka la soo galo si loo hubiyo inaad haysato marka wakhtigu yimaado. Nasiib wanaag Waxaa jira wakaalado iyo shirkado bixiya si ay u fuliyaan nidaamkan. socotada si ayan uga welwelin shay.
Haddii aad qorsheyneyso inaad Sri Lanka ku soo gasho wax ka yar 7 maalmood oo aad u baahan tahay oggolaanshaha ETA si degdeg ah, sidoo kale waa laga baaraandegi karaa laakiin waa inaad ku muuji codsiga in uu yahay habraac degdeg ah tani waxay yeelan kartaa kharash dheeri ah, maadaama ay tahay inay codsiga ETA ku baaraandegaan waqti aad uga yar sidii caadiga ahayd.
Sida aad arki karto, waa lagama maarmaan in Isbaanishka ay dalbadaan fiisaha si ay u galaan Sri Lanka sabab kasta oo socdaal ah, haddii ay tahay dalxiis ama ganacsi. Nidaam lama huraan ah oo sahlaya in dadka dalxiisayaasha ah ay ku safraan marka ay ka soo degaan garoonka, isla markaana u ogolaanaya dalka in uu si weyn u maamulo dadka soo gala dhulkiisa oo ka soo tallaabaya xuduudihiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Booqashada Sri Lanka: Dalxiisayaasha Isbaanishka miyay u baahan yihiin fiisaha?